I-Cap Liner, Seal Induction Heat, Seal Liner - Ukupakisha kweZiling
IShanghai Ziling Packaging Co., Ltd. ingomunye wabaholi beCap Seal Liners Manufacturers eChina, eyasungulwa ngeminyaka yama-1990s, igxile ekukhiqizeni ama-Liners wokufaka uphawu lwe-aluminium, izingilazi zokuvala ingilazi, i-liner yokufaka uphawu lokucindezela, i-EVA Foam Liners, i-EPE Foam Liners , ukuvala izindwangu zokuvala uphawu, njll.
Amabili-Piece Heat Induction Heat Seal Liner Nge “...
Ingcezu eyodwa ye-Heat Induction Seal Liner ene-Inner ...
Xhumana nathi ukuthola amanye ama-albhamu wesampula
Iphrintiwe ngezimpawu zokuhweba noma iziqubulo ezikhethekile
Ukuhlatshwe umxhwele ngamalebula akhethekile.
Kulula ngezicelo ezahlukahlukene.
312020 / Okthoba
Izinzuzo Isicelo aluminium ucwecwe gasket
Izinzuzo Zokusebenza Ze-Aluminium Foil Gasket Aluminium foil gasket yenziwe nge-aluminium ngemuva kokucindezela bese yenziwa ngokuya ngezinhloso ezahlukahlukene. Kuvame ukusetshenziselwa kwezinye izimboni zokupakisha ukuhlukanisa umoya futhi kunwebe i ...
Imakethe Ye-Induction Cap ye-Heat Induction ukuze ibambe amandla amakhulu okukhula
Imakethe Ye-Induction Cap Liner Market Ukubamba Amandla Amakhulu Emboni Yokufaka Ukukhula ibone ukukhula okumangazayo eminyakeni embalwa edlule ngenxa yokwanda kokusetshenziswa kwezimpahla ezihlanganisiwe emhlabeni jikelele. Izigidi zemikhiqizo ...
292020 / Septhemba
Ama-Gaskets e-White Cross axhumene ne-White Cross
I-White Cross-linked Polyethylene Foam Gaskets Kuvaliwe iseli esiphambanweni esixhunywe i-polyethylene foam ingahlala ingenye yezinto ezinhle kakhulu ze-foam gasket. Igwebu le-polyethylene linezigaba ezimbili eziyinhloko - i-polyethylene foam ehlanganiswe namakhemikhali ...